Waxay ka timid Jordan, waxay ku hadasha Carabi iyo Ingiriis
Elisabeth Ahlam Holzbrecher waxay ku dhalatay Jordan, waxay ku nooleyd Jarmalka tan iyo 1994, waxay baratay barnaamijyada kombiyuutarka iyo falanqaynta nidaamyada, waxay tahay hooyo 15 sano, waxayna markii hore ku lug lahayd tabaruc iyo iskuulada hoose ee ku dhawaad ​​10 sano (2003-2012).
Laga soo bilaabo 2012 waxay si mutadawacnimo ah uga shaqeyneysay gargaarka qaxootiga, iyo sidoo kale sameynta iyo kobcinta daryeelka gelinka dambe ee iskuuladan, oo ay kujiraan wax wada qabsiyo iyo mashruucyo. Laga soo bilaabo 2012 waxay sidoo kale si mutadawacnimo ah uga shaqaysay meelo badan sidii tarjubaan Carabi ah, oo ay ka mid yihiin: kaniisadda, caafimaadka, skuulka iyo xafiisyaha dowladee. Waxay ka shaqeyneysay turjubaan iyo turjubaan qooral ahan ee luqadaha Carabi / Jarmal ah xirfad ahaan tan iyo 2017 waxayna ka dooneysay shahaadada Rugta Wershadaha iyo Ganacsiga.
nashaadaad dheeri ah:
Farshaxanka qurxinta ee 2012-2014
Xoog-hayaha Kaniisadda Evangelical Church Undenheim.
Dhexdhexaadiyaha luqadeed ee IHK-xaqiijiyay ee VHS Mainz laga soo bilaabo 2018